भ’र्खरै मो’रङ उर्ला’बारी बा’रे आयो य’स्तो ख’बर ! जिल्ला अ,दाल’तको यस्तो फै,स’ला(भिडियो सहित):: Mero Desh
भ’र्खरै मो’रङ उर्ला’बारी बा’रे आयो य’स्तो ख’बर ! जिल्ला अ,दाल’तको यस्तो फै,स’ला(भिडियो सहित)
Published on: २० चैत्र २०७७, शुक्रबार ०६:२८
“उ”र्लाबारी नगरपालिका–५ का ३१ व”र्षीय प्र”विण बाँस्तोला को ग’त पुस ५ गते भ’एको मृ ,त्यु प्र’क’रण’मा मृ त्यु वा ह त्या”को कारण र सं’लग्न व्य’क्तिसम्म प्र,हरी न’पुग्दै सा’मसुम हुनै लागेको थियो । तर जब मृ,त’ककी ब’हिनी दू’र्गा बाँस्तो -ला ‘सदीक्षा’ले जनस्तरबाटै घ,ट’ना को छानबिन थालिन्, शं’का’स्प’दहरू न्यायको क’ठघरा सम्म पु’गेका छन् ।
“राज्यबाट अ’ख्ति’यार’प्राप्त प्र,हरीले गर्न नसके को काम पी,डित परि’वारकी एक युवतीले गर्न कसरी स’म्भव भयो ? शं`का,स्प’द आ’रो’पीसम्म पुग्न स’दीक्षाले प्र,हरी””लाई क’सरी बा’ध्य पा’रिन्? यसका पछाडि सदीक्षाले धेरै सं’घर्ष ग’र्नुप’रेको छ ।
“मृ,त क’की बहि’नी सदी’क्षाले दा’जुको न्या`यका लागि ईलाका प्र,हरी का’र्यालयमा गरे’को संर्घ”ष र देखाएको साहस पछिल्लो समयमा उदाहरणीय बनेको छ । यद्यपि, आजभोलि सदिच्छालाई सुर’क्षामा थ्रे’ड भएको छ ।
“उनका बारेमा अ’न’र्गल प्रचा’र गर्दै अमेरिका जान सम्म रो’क्ने प्र’यास भै रहे’को समाचार श्रोत बताउछ । पछिल्लो अ’पडेट बारे हामीले उनै स,दिच्छा,सङ कु’रा’कानि गरेका छौ ।
यो पनि,,कन्च’नको लक भएको मो’वाइल खुलेपछि, खु’ल्यो यस्तो नयाँ रहस्य (भिडियो सहित)
“कञ्चन तिमि’ल्सेना सामा’जिक सञ्जालमा निकै चर्चि` त भएको विषय हो । प्रेमका लागि जिवन त्या`ग गरेका कञ्चनलाई न्या`य दि’लाउनु पर्छ भन्दै उनको आमा अ’हिले काठ’माडौमा विभिन्न सामाजिक अगुवा र मानव अधिका रकर्मीलाई भेट गर्दै हिडेकी छन् । उनलाई केही सामाजिक अ’भि’यन्ता’हरुले साथ पनि दिएका छन् ।
“सामा’जिक अ’भि’यन्ताको सं’रक्षणमा रहेकी उनले कञ्च नको मोवाइलको लक खोलेकी छन् । उनले क’ञ्चनसंग युव’तीको परिवारले गरेको कु’राकानी स ‘मेत सु’नेकी छन् ।जसमा कञ्चन ले युवतीको चाहना विप`रित आफुले केही पनि नगरेको र दुवै जनाको इच्छा र मा’याले वि’वाह गरेको बताएका छन् ।
“तर युवतीका आ’फन्तले कञ्चन’लाई वि`पन्न भन्दै अ’प`मान गरेको पनि अडियोमा सु’न्न सकिन्छ । उनले यु’वतीको नाम लिँदै भनेका छन्, हामी दु’वैको मन मिलेर वि’वाह गरेको हो, उनी बच्चा त हो’इनन् नी ।
“अब हामीले विवाह गरि’सक्यौं कञ्चनले फोनमा भनेको सु’न्न स’किन्छ । कञ्चनले यो सन्सारबाट बिदा लिए । तर उन’को परिवारले भो`गेको त ना व अझै सकिएको छैन ।
“छोरा गुमा`उनु प’र्दाको दु`ख त छँदैछ, त्यस माथि मानिसका अनेक प्र’श्नले उनकी आमा पनि थप दु`खमा छिन् । प’छिल्लो समय कञ्चन र अ’निशा प्रक`रणमा १ ला’खको कु’रो आएको छ ।
“यसको ब्या`पक मि’डिया च`र्चा पनि भएको छ । हालै एक भिडियो सार्वजनिक भएको छ, त्यहाँ एक लाख रकम को बारेमा थप जान”कारी समेटि एको छ । ६६ दिनको लामो बे`होसी जि’न्दगीपछि कञ्चनले आइतबार अन्तिम सा`स फेरे ।
“अस्प’तालको आइसि’युमा बो’ल्न र हेर्न नसक्ने अवस्था का कञ्चनले बि ष पि ए का थिए । उनले अ’निशा कुमाल सँग प्रेम विावह गरेका थिए तर लगत्तै माइती पक्ष””को फरक ब्य”वहार पछि उनले यस्तो कदम उठाएका थिए ।
“पूर्वी चितवनका कञ्चन तिमल्सिना र अनिशा कुमाल को प्रेम प्र’सं`गले २ महिना यता ठूलो च`र्चा पायो । काठ -माडौँमा विवाह गरेर चि”तवन गएपछि अनिशा आफ्नै घर फर्किइन् ।अनिशाले चिन्दिन भनेपछि क’ञ्च ‘नले त्यस्तो क’दम उठाएका थिए ।